Fat – Healthy Life Journal
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. သမီးက အိမ်ထောင်သက် ၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ အသက် ၃၁ နှစ်ပါ။ သားသမီးမရသေးပါ။ ရာသီမမှန်ပါ။ အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်တာ အရွယ်မကြီးတဲ့ သားဥတွေများနေလို့လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်ပါသလဲရှင့်။...
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီလောင်ကျွမ်းမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရှောင်ဖို့၊ ဆောင်ဖို့
လရိပ်မေ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ လူအများစု နေ့စဉ်ပုံမှန်စားတတ်တဲ့ အစာတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ အဆီလောက်ကျွမ်းမှုများပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နံနက် ၇နာရီ ရှောင်ပါ – သကြားပါတဲ့ နွားနို့ ကိုယ်အလေးချိန် ဘယ်လောက်လျော့ကျနိုင်သလဲ တစ်နှစ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၈...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. အ၀လွန်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါသလား ဆရာ။ A. ၀တဲ့သူနဲ့ ပိန်တဲ့သူတွေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ၀တဲ့သူတွေက ရောဂါဖြစ်နှုန်း ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၀ရင်...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီပိုများနှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆဲလ်လူးလိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ အဆီတွေက ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီတွေကရှိသင့်တာထက် ပို လာတဲ့အခါ ကြွက်သားနဲ့ အရေပြားကြားမှာ Fibrous Tissue...